3-Gareth Bale-Real Madrid
Zinedine Zidane ayaa haddaba Gareth Bale si fool-ka-fool ah ugu sheegay in aanu ku jirin qorshihiisa xili ciyaareedka soo socda waxaana liiska Madrid ee labadii kulan ee ugu danbeeyay laga wayayay Bale isaga oo taam ah.
Real Madrid ayaa ugu danbayn diyaar u ah in ay Gareth Bale ka diraan Santiago Bernabeu waxaana xaaladiisa sii xumeeyay soo laabashada Zidane oo uu sabab u ahaa in uu shaqada iska casilay horaantii xili ciyaareedkan.
Kooxaha Chelsea, Man United, PSG iyo Tottenham ayay suurtogal tahay in uu Gareth Bale ku biiri karo inkasta oo magaca Bayern Munich uu mar ka mid ahaa kooxaha doonaya saxiixa xidiga reer Wales.
Madax waynaha Real Madrid ee Florentino Perez oo waqti dheer garab taagnaa Bale ayaa hadda u muuqda mid baneeyay garabkii xidiga reer Wales kaas oo hadda ku qasban in uu koox raadsado.
Gareth Bale ayaa dalbaday in uu kulan khaas ah la qaato agaasimayaasha kooxdiisa real Madrid wuxuuna si cad ugu sheegay in aanu meelna uga socon kooxda isla markaana uu Bernabue sii joogayo.
Real Madrid ayaa u baahan in ay iibiso ciyaartoy badan oo kooxdeeda ah si ay u soo saarto lacag gaadhaysa 270 milyan yuro si ay ugu hogaansanto sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha yurub oo ay xisaabta kooxdeeda iskugu dheeli tirto.
Laakiin dhibta ugu wayn ee ay ilaa hadda Real Madrid la kulmayso ayaa ah in ayna jirin koox dalab rasmi ah ka soo gudbisay Gareth Bale waxaana sabab u ah xaalada xun ee uu Madrid kaga soo jiray iyo qiimaha sare ee ay Los Blancos ku doonayso.
Laakiin waxaa la filayaa in Bale uu Madrid ka bixi karo haddii uu helo koox mushaarkiisa 17 ka milyan yuro ah sanadkii bixin karta isla markaana uu fursad uu ku ciyaaro ka heli karo balse kooxaha ayaa hadda u muuqda kuwo ka cabsanaya xaalada Bale.
Waxaa la filayaa in Gareth Bale uu ka mid noqon doono ciyaartoyda saamaynta wayn xagaagan ku yeelan doona suuqa kala iibsiga balse waxaa lays waydiinayaa halka uu waayihiisa ka sii wadan doono.